तेस्रो घण्टाको अवधिमा फेरि नेप्से ०‍.६४ ले घट्यो - Everest Dainik - News from Nepal
तेस्रो घण्टाको अवधिमा फेरि नेप्से ०‍.६४ ले घट्यो
काठमाडौं । मङ्गलवार नेप्से परिसूचक कारोबार भएको तेस्रो घण्टाको अवधिमा शून्य दशमलव ६४ प्रतिशत घटेको छ । ८ दशमलव २७ अङ्क घटेर परिसूचक १ हजार २ सय ७९ दशमलव ५१ विन्दुमा पुगेको छ ।
कारोबार भएका ९ समूहको परिसूचकमा होटल र ‘अन्य’ समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक घटेको छ।
१ सय ५३ कम्पनीको रू. २३ करोड १६ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । बुटवल पावर कम्पनीको रू. १ करोड ७ लाख बराबरको सर्वाधिक शेयर कारोबार भएको छ ।